Sidee muhiim u yihiin xiriirka wadajirka ah ee u dhaxeeya magaca domain iyo SEO?
Sida laga soo xigtay saddexda saamiyadood ee Google, website-ka waxtarka, tayada content, iyo faylalka gadaal-galka ah ayaa ah kuwa ugu waxtarka leh ee lagu ogaanayo inay ku jiri doonaan sare ee SERPs, ama. Taasi waa run, gaar ahaan marka la tixgeliyo saamiyada libaax ee macaamiishaada suurogalka ah inay u badan tahay in ay booqashadooda ugu horreysa booqato boggaga internetka ee ka yimid liiska natiijooyinka raadinta ee ugu sareysa. Sidaa darteed, magac domain wanaagsan iyo dayactir SEO ah waxaa loo yaqaan karaa sumadaha ee laga yaabo in kastoo website kasta. Iyadoo la tixgelinayo magaca magac kasta oo caadi ah si gooni ah, waxaa badanaa la dhisaa magaca shirkadda shirkada, oo lagu taageerayo ereyada ugu muhiimsan iyo kuwa muhiimka ah iyo odhaahaha muhiimka ah. Laakiin su'aasha ku saabsan isdhexgalka ee magaca domain iyo saameeynta SEO ee taxanaha Google ayaa had iyo jeer ahaa mowduuc aad u dood badan. Ka dib oo dhan, ma jiraan wax calaamado caddayn ah si toos ah isku xirka u dhexeeya magaca domain iyo SEO? Taasi waa sababta aan u go'aamiyay in la helo sababaha ugu muhiimsan ee la soo koobay oo lagu taageeray qaar ka mid ah xaqiiqooyinka qabow ee hoos ku qoran. Xaqiiqooyinka adag
Dhab ahaantii, saamiyada Google ee aan waligood haysanin tilmaamo adag ama shuruudaha rasmiga ah ee aynu ku ogaan doonno tallaabo tallaabo tallaabo ah. Sida iska cad, shirkadda weyn ee ganacsigu waxay ku dadaalaysaa inay ka hortagto wax kasta oo khayaano ah ama khiyaamo wax-qabad ah, Laakiin hal shay ayaa hubaal ah - sida badan tijaabooyinka tijaabada ah, waxaa jira qiyaastii laba boqol oo isirro oo kala duwan oo ku lug leh algorithm si loo go'aamiyo bogga internetka liiska natiijooyinka bogga search engine. Iyadoo la tixgelinayo qaar ka mid ah fikradaha qiimaha leh ee shaqaalihii hore, iyo sidoo kale aragtiyaha intiisa kale iyo fikradaha macquulka ah, waxaa jira waxyaabo aad u muuqda oo laga yaabo inay soo qaadaan magaca domain iyo dayactirka SEO oo la socda.
Ka fikir dadka isticmaala, ma raadinta robotyada
Hubaal, xulashada domain ee saxda ah waa talaabo muhiim ah oo jidka u maraya guushaada internetka ee mudada dheer. Oo waxaan halkan ku talinaynaa si aad u hesho magaca domain-saaxiibtinimo ugu horeysay ee ugu horeysa. Looma baahna inaad isku daydo inaad si xushmad leh ula qabsato mashiinka raadinta raadinta. Waxaa macquul ah in laga fikiro dadka isticmaala dhabta ah, markaa waxaan soo jeedinayaa in la soo koobo, magac muuqaal ah oo la xasuusto, kaas oo noqon lahaa mid gebi ahaanba la xidhiidha oo la aqoonsan karo halkan. Inaad xor u tahay inaad ku soo dhejiso magaca ganacsigaaga, sidoo kale qodobbada saxda ah iyo isku dhafka.
Daraasad muhiim ah oo cilmi baaris ah
Dib u eegista, magacyada domainka oo ay ku jiraan erayga saxda ah ee loo adeegsaday in lagu yeesho faa'iido kala duwan inta ka hartay tartamayaasha ku jira natiijooyinka raadinta Google. Waqtiyadaasi waxay horey u soo gudbeen muddo dheer, waxaana guud ahaan xukunka guud ee ereyada muhiimka ah ay hadda xiran yihiin. Hadda mashiinnada raadinta waxay u muuqdaan inay ka mahad celinayaan bogagga internetka ee bixiya qiime aad u sarreeya isticmaalaha, i. e. , haysashada wax tayo leh oo tayo leh. Laakiin caqligii hore ee keyword domain ee keyword weli wuu ku jiraa, sida weedhaha muhiimka ah ee magaca domainka ayaa ah kuwo user-saaxiibtinimo badan u oggolaanaya martida inay sameeyaan xiriir ka dhexeeya su'aalaha raadinta shakhsiyeed iyo bogga bogga laftiisa laftiisa. Ma aha in la yiraahdo URL-yada noocaas ahi waxay faa'iido u yeelanayaan wadaagista, taas oo keeneysa saameyn togan oo ku saabsan qiimaha riixitaanka. Sidaa oo kale, waxaad ku dhiirigelin kartaa Google in ay ku siiso boggaaga internetka oo leh darajo sare. Sidaas, marnaba skimp on samaynta cilmi-baaris doorka muhiimka ah marka aad sameysey ilaa aad magac domain cusub. Ma qoomameynayo, waan hubaa Source .